Salda Ski Resort vonona amin'ny vanim-potoana
Farihin'i Salda ao Burdur niakatra tao amin'ny Ivotoerana Ski Salda 900 taona. Tamin'ny vanin-taona mafana ny farihy any Torkia hoy Salt raha nitsidika ny Maldives 1 tapitrisa 400 arivo ny olona, ​​ny vanim-potoana ririnina [More ...]
Hakkari Merga Butane Ski Centre Vonona hanome Host Ski Enthusiasts
İdris Akbıyık, governoran'i Hakkari sy lefitra lefitra no nanao fanadihadiana momba ny kianja sy piste ao amin'ny Centre Ski Merga Bütan. Ny fitsidihan'ny governora Akbıyık dia nitsidika ilay toerana fantsom-bolam-bary sy piste tao amin'ilay toerana fanaovana ski. [More ...]
İdris Akbıyık, governoran'i Hakkâri, dia nandinika ireo fitohizam-bola mitohy sy vaovao any amin'ny Centre Ski Merga Butan miaraka amin'ny 2.500. Governemanta Akbiyik, Lehiben'ny Fampanoavana Mustafa Balik, lefitra governemantan Mustafa Duruk, [More ...]
Ny marika 2 arivo an'ny Tafika Çambaşı Plateau 650 natsangana teo amin'ny faritra fiovan'ny exerciseambaşı Sports Sports sy Ski Center izay natao dia tsy nikaroka ny marina. Fikarohana Fikarohana sy Fanavotana Metropolitan'ny tafika [More ...]
Ny foibem-paritry ny fizahantany ara-panatanjahantena ao Davraz dia fananganana trano sy fotodrafitrasa 5. [More ...]
Ny Centre Sarikamis Ski Chairlift Tender dia natao: 3 Ny Sarikamis Ski Center Chairlift, izay nolanina tamin'ny volana novambra, dia hovitaina ary apetraka amin'ny fanompoana aorian'ny volana 2. Sarikamis Cibiltepe Ski Resort 2. Septambra amin'ny efitrano ambony amin'ny sehatra 13 [More ...]
Mpamatsy vola maika no tadiavina amin'ny fananganana ropeway any Trabzona: Ny foibe ski nikasa hanangana eo amin'ny Plateau Çakırgöl ao amin'ny haben'ny 2504 any Trabzon dia vita amin'ny taona ho avy saingy misy ny tsy fahampian'ny; Mpamatsy vola izay hanangana fiara tariby. [More ...]
Trabzonspor Davraz Camp dia nanantitrantitra tamin'ny alàlan'ny fiarakodia tamin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby: Trabzonspor Isparta Davraz ny tobin'ny Trabzonspor Isparta Davraz raha niomana ho amin'ny vanim-potoana vaovao anio, nohamafisinin'ny fanentanana ny fiantsonan'ny tariby. Fiomanana hatrany amin'ny vanim-potoana vaovao ao Isparta Davraz [More ...]
Ao amin'ny 24 2012 May LEITNER in Bursa, Torkia no nanatanteraka ny fanokafana ofisialy. Leitner ny mitarika ireo orinasa ao amin'ny sehatry fiara telegrama tao Bursa, Torkia manohy ny asa tao amin'ny birao. LEITNER ropeways efa tonga tao amin'ny nanasongadina ao Torkia tamin'ny faritra lehibe telo. Ireo no: [More ...]
Ny fampiasam-bolan'ny rafitry ny Rail dia tsy havoaka amin'ny volan'ny rafitra VAT Rail izay hatao ao anatin'ny sakana 2023 kendrena ho voaroaka amin'ny VAT. Ny zana-tanàna dia handray soa avy amin'ny fanentanana ny governemanta hanilihana ny VAT amin'ny rafi-pitaterana rafi-pitaterana miasa ao anatin'ny tetik'asa 2023. [More ...]
Inona no atao hoe mifoka? Ireo izay napetraka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny ski dia matetika mipetraka seza, fa ireo izay miasa eo anelanelan'ny toby sy toeram-ponenana dia trano fatana kely. Amin'ny tany sasany [More ...]